Fungicide "Quadris": प्रयोग, वर्णन र समीक्षा लागि निर्देशन
एक फंगल रोग - जो धेरै हानि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बगैंचामा यो निमन्त्रणानगरिएकोजडान अतिथि। र पहिले नै प्रस्ट छन् जो फंगल घाउ, सामना गर्न, एकदम गाह्रो छ। बस एक फ्लैश - तिनीहरूले चाँडै पर्याप्त विकास, र केही। तसर्थ, उत्पादक मदत गर्न यस्तो fungicides रूपमा लागूपदार्थ पत्ता थिए। यी यो सम्भव कुशलतापूर्वक बीउ नक्काशी र पूर्ण रूपमा प्रशोधन बिरुवाहरु रोकथाम र रोग को यस प्रकार को उपचार को प्रयोजन को लागि हुर्किसकेका छन् साथै फंगल spores तिनीहरूलाई छुटकारा बनाउन जो रासायनिक यौगिकहरु छन्। आज हामी fungicide बारेमा बताउन चाहन्छु "Quadris।" प्रयोगको लागि निर्देशन उहाँलाई फंगल एक जटिल सामना गर्न सबैभन्दा प्रगतिशील आधुनिक उपकरण को एक भनिएको छ।
वास्तवमा, systemic fungicide रोगबाट खीरे र टमाटर, प्याज र अङ्गुर, स्ट्रबेरी को एक किसिम लड्न मद्दत गर्छ। त्यो हात मा छ बस एक राम्रो फसल प्राप्त गर्न आवश्यक माली लागि हो। तर किन आज हामी एक fungicide "Quadris" मा इच्छुक हुनुहुन्छ? प्रयोगकर्ता आवेदन यसलाई सुरक्षित छ र एकै समयमा, निवारक उपचारात्मक र उन्मूलन कार्य भएको उल्लेख। तयारीको उत्कृष्ट antisporuliruyuschimi गुण छ। यसलाई अझ बढाउँछ र पात photosynthesis prolongs।
बगैचा मा दबाइ को प्रयोग
उपयुक्त fungicide "Quadris" सबै बगैचा बिरुवाहरु हुनुहुन्छ? दबाइ को प्रयोगको लागि निर्देशन ग्रेड र प्रकार को एक किसिम आफ्नो पूर्ण सुरक्षा र उत्कृष्ट adaptability उल्लेख गरे। छ, तपाईं सिफारिस औषधिको खुराक गर्न adhering गर्दा, सारा बगैचा स्प्रे गर्न डर सक्दैन। हालैका दशकहरूमा भाइरल र जीवाणु रोग को एक अभूतपूर्व फूल देखेको छु, र यो सबै अपवाद, बागवानी बाली बिना असर गर्छ। सुरुमा यो तिनीहरूले उपचार प्रतिक्रिया छैन, कि तर त्यसपछि fungicide विकास भएको थियो लाग्यो थियो "Quadris।" प्रयोगको लागि निर्देशन दबाइ एक लगातार निवारक र systemic चिकित्सकीय प्रभाव छ जोड दिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - ढिलो थियो।
संस्कृति र रोग
अब हामीलाई केही बाली लागि भनेर र प्रयोग "Quadris टीएम" (एक fungicide) अक्सर कसरी विस्तृत गरौं। प्रयोग स्थानान्तरण वस्तुतः सबै बागवानी बाली यस दबाइ प्रयोग जीवाणु रोग विरुद्ध जोगाउन सक्छ लागि निर्देशन। आलु मुख्यतया लेट blight र प्रारम्भिक blight द्वारा व्यवहार हो। को गर्मी भन्दा, उत्तरार्द्ध बाली अघि7दिन सिफारिस गरिएको छ,2उपचार गर्न आवश्यक छ। गोभी सीधा फल को कटाई अघि शरद ऋतु अवधि मा क्षय विरुद्ध उपचार। प्याज सबैभन्दा perenosporoza र प्रभावित छन् fusarium आउनुहुनेछ, र पनि "Quadris" सामना यी रोगहरु संग मद्दत गर्छ। बाली काट्ने अघि एक हप्ताको - प्याज बेड प्रति सिजन दुई पटक, उपचार पछिल्लो समय। "Quadris" संग प्रभावकारी खीरे मा फफूंदी युद्ध गर्न सक्छौं। प्रति सिजन को ब्रश तीन पटक स्प्रे गर्न अनुमति दिएको छ, तर यो उपचार परिणाम पछि पाँच दिनको अवधिका लिन सिफारिस गरिएको छैन। स्थिति आफ्नो दबाइ लेट blight र खैरो स्पट देखि ज्यादातर व्यवहार, टमाटर संग पनि त्यस्तै हो।
दबाइ को मुख्य लाभ
पहिलो र मुख्य यो चिकित्सकीय प्रभाव2दिन को लागि रहन्छ कि टिप्पण लायक छ। त्यो छ, यो सम्भव पूर्ण रोगजनक र गर्मी चालू अवधि मा हो विवाद नष्ट बनाउँछ। मा नै समय कार्य उन्मूलन गर्न अनुमति दिन्छ तपाईं पूर्ण संक्रमण को विकास र क्षेत्रमा यसको प्रसार रोक्न। यी प्रभाव माली लागि हो र दबाइ "Quadris" (एक fungicide) चयन गर्नुहोस्। प्रयोगको लागि निर्देशन, अनुभवी माली समीक्षा लागि शुरुआती र फंगल को समस्या सामना पहिलो पटक उपयोगी जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। पहिलो समीक्षा यो भन्दा साधारण रोगहरु को एक पूरी गुच्छा देखि बिरुवाहरु सुरक्षा मात्र दबाइ हो भनेर जोड। "Quadris" रक्षा मात्र होइन र बिरुवाहरु निको पार्न, तर पनि fruiting 2-3 हप्ता विस्तार गर्न मौका प्रदान गर्दछ। यो बाली काट्ने मौसममा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छैन भनेर एक अद्वितीय उपकरण हो। यसबाहेक, सीधा फल कटाई अघि को प्रयोग निकै भएको Cellars र भंडार आफ्नो संरक्षण बढ्छ। "Quadris" पूर्ण मौरीले र वातावरण गर्न गैर-विषाक्त।
दबाइ को प्रयोग को सुविधाहरू
त्यसैले, कसरी एक fungicide "Quadris" प्रयोग गर्ने? पानी प्रयोग 10 लिटर लागि निर्देशन पनि अन्य fungicides थप्न सिफारिस गरिएको छ। यसले के गर्छ? जो आज रोगहरु धेरै छन्, र निर्धारण भन्ने तथ्यलाई यो बोट हरेक cottager सक्दैन पीडित। त्यसैले यो फराकिलोकालागि सम्भव स्पेक्ट्रम को एक समाधान तयार गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस दबाइ गर्न थपेर एक systemic fungicide «Alett" र "Dzherelo", "डिफेन्डर" र धेरै अरूलाई हुन सक्छ। चिकित्सा समाधान को तयारी समयमा यो बिन्दु विचार गर्नुहोस्।
तपाईं ठूलो acreage छ भने, त्यसपछि तपाईं निश्चित रोग फैलने रोक्न उपचार बारम्बार छ। त्यसैले पछि दुई लगातार उपचार "Quadris" परिवर्तन र सक्रिय पदार्थ को strobilurins को कार्य एक फरक संयन्त्र fungicides प्रयोग गर्न छ हुनुपर्छ।
मौसम पूर्वानुमान मूल्याङ्कन गर्न निश्चित हुनुहोस्, भिजेको पत्ते को दबाइ उपचार खर्च छैन वा गर्न जाँदै गर्दा बादल आँधी र अर्को केही घण्टामा वर्षा हुन सक्छ।
उत्पादनहरु को खपत
यसलाई कसरी fungicide वितरण गर्न अग्रिम थाहा महत्त्वपूर्ण छ "Quadris।" 10 लिटर मा प्रयोगको लागि निर्देशन दबाइ को5एमएल बनाउन सिफारिस, तर यो परिणामस्वरूप एकाग्रचित्त समाधान जमीन तल बगिरहेको बिना केवल पात sprayed पर्छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ, सानो स्प्रे प्रयोग र यो ज्यादा छैन: दबाइ को एक सानो राशि समस्या समाधान गर्न सक्षम छ छैन बुरा छ। तर स्याउ बगैचा दबाइ धेरै संवेदनशील छन्, त्यसैले यो दबाइ सक्छन् अचाक्ली हानि को remnants रूपमा, "Quadris", प्रशोधन स्याउ रूखहरू लागि बनाउन जो माध्यम पनि उपकरण प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
समाधान को तयारी
गरेको पनि कसरी काम गरिरहेको समाधान "Quadris" लागूपदार्थको तयार ध्यान केन्द्रित गरौं। Fungicide (100 एमएल) निर्देश पुस्तिका आफ्नो बगैचा को आकार मा निर्भर गर्दछ, बोट भागहरु प्रदान गर्दछ। छिडकाव पानी तेस्रो द्वारा हालिएको छ, त्यसपछि यो र दबाइ दोषी मा शुरू गरिएको छ। तपाईं त पानी थप्न र प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम समाधान तयारी दिन खर्च गर्नुपर्छ।
को दाखबारीमा प्रयोग
दाखको बोट विकास गर्नेहरूलाई, यो हार को फंगल गर्न खतरा छ कसरी राम्ररी थाह छन्। माली किन दबाइ "Quadris" (एक fungicide) को उद्भव बारेमा उत्साहित छन् कि छ। अंगूर प्रक्रिया को प्रयोगको लागि निर्देशनहरू मौसममा तीन पटक प्रदर्शन गर्न शामिल छ, र बाद बाली अघि पछि छैन 25 भन्दा दिन भनेर पक्का। मात्र अन्य fungicides संयोजनमा "Quadris" लागू यस मामला मा। छिडकाव समयमा, बढ्दो मौसममा गरिन्छ, र फूल पछि, हरी जामुन। खपत - प्रति हेक्टर 1000 लिटर। प्रक्रिया पूरा भएपछि, "Quadris" एक fungicide कार्य एक फरक संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ। फफूंदी र oidium, खैरो मोल्ड, काली स्थान, एक संक्रामक desiccation देखि प्रक्रिया दाखबारी।
स्ट्रबेरी को सबै भन्दा साधारण रोगहरु - यो सेतो र खैरो स्पट, खैरो मोल्ड छ। रोग तिनीहरूले पूर्ण सम्पूर्ण बाली नष्ट गर्न सक्छन्, गम्भीर छन्। यी रोगहरु को रोकथामका उपचार मात्र होइन मनमोहक, तर आवश्यक छ। यस मामला, "Quadris" (fungicide) मा प्रयोग गरिएको? स्ट्रबेरी लागि प्रयोगको लागि निर्देशन तपाईंको बाली प्रशस्त र उच्च गुणस्तर को थियो भनेर, उपाय एक श्रृंखला अपनाउनु आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। वसन्त मा, तापमान 10 डिग्री गर्न rises गर्दा, यो आवश्यक पनि fungicide "Horobi" वा "strobes" प्रक्रिया हो। यो एक खैरो र सेतो क्षय हुनु विरुद्ध सुरक्षा दिनुहुनेछ। पछि (10 दिन) धेरै राम्रो fungicide उपचार "स्विच"। बस पहिले नै फूल ब्रश दबाइ स्प्रे गर्न आवश्यक अघि "Quadris।" तर फूल पछि र फल पकने समयमा कुनै पनि रसायन प्रयोग गर्न राम्रो छ। अब बाली पछि अर्को सिजन लागि स्वास्थ्य र ब्रश सुनिश्चित प्रशोधन "Quadris" बारम्बार आवश्यक छ। माली को समीक्षा द्वारा न्याय, को fungicide आफ्नो बगैचा को लागि एक उत्कृष्ट सुरक्षा सुरक्षित र दबाइ को प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ।
खाद हालन के हो? जैविक मल, बागवानी
पत्थर फूल बिरूवा (रक गुलाब): रोपण र हेरविचार
केरा रूख - घर मा विदेशी सौन्दर्य
कसरी वसन्त मा स्याउको रूख हेरचाह गर्न? वसन्त मा स्प्रे स्याउ रूखहरू?
छाँट्ने अङ्गुर। को अङ्गुर कसरी कटौती गर्न
Mulching - यो के हो
घरमा Liverwurst। लागि नुस्खा
विसंगति Kemerli: एक रोग तर vriant नियम
"Mesomorph" कसरी लिन (predtrenik)
Oleg Kenzo - जीवनी र काम
चीन रेलवे। र उच्च गतिको चीन रेल
Platanovaya गली (सोची): वर्णन, इतिहास, विशेषताहरु
रूस मा राम्रो संकेत
विशेषताहरु र लेबलिंग एल ई डी
भिटाली Portnikov: को युक्रेनी पत्रकार को जीवन को बाटो
"Dota 2" चलान छैन: के?